Kamio - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Misy fotoana manalehibe ny mason'ny ankizy. Azo antoka fa tafiditra ao anatin'izany ny fotoana isian'ny kamio mpamono afo be dia be mamakivaky ny arabe ary angamba amin'io fotoana io ny zazalahy kely no manapa-kevitra ny amin'ny tanjon'izy ireo.
Ny mahasarika fiara lehibe
Tena te-ho tonga mpamono afo ianao. Mazava ho azy, io safidin'ny kariera io dia afaka manova im-polo ambin'ny folo taona lasa - mandra-pahatongan'ny fotoana tena ilana ilay asa-tahaka ny tena hitranga amin'ny ankamaroan'ny tranga.
mahaliana ny fiara lehibe. Sary avy amin'i Daren Mehl avy ao amin'ny pixel
Na izany aza, raha manontany kely isika amin'ireo mpamono afo ankehitriny, ny iray na ny tantara hafa dia mety hanomboka amin'ity kamiao mpamono afo ity izay namakivaky ny arabe tamin'izany fotoana izany.
Mety hitovy izany amin'ny kamio tena lehibe izay hitanao hatrany amin'ny làlambe na amin'ny làlambe. Ny taksi mpamily maro dia toa efitrano fandraisam-bahiny. "Ankizy sy mahavariana ny fiara lehibe" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 22. Janoary 2021 Sokajy fampianaranaKeywords Autos, fiara, Ny mahavariana ny fiara, ankizy, TrucksLeave a Comment ho an'ny ankizy sy ny fahalianan'ny fiara lehibe